Vokatry ny fambolena : maivana ny voamaina aondrana any ivelany | NewsMada
Vokatry ny fambolena : maivana ny voamaina aondrana any ivelany
Mbola maivana dia maivana ny vokatra voamaina rehetra (katsaka, tsaramaso, lojy, sns,) aondran’i Madagasikara any ivelany. Tsy tratra ny 10.000 t isan-taona alefa any ivelany amin’ireo voamaina rehetra ireo, nefa ny tsena malalaka, na aty amin’ny faritra ranomasimbe Indianina sy ny Comesa, aty Afrika. Mila ezaka ny amin’izany amina ambaratonga samihafa, miainga avy amin’ny politikan’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana hatrany amin’ny mpamboly. Ny faritra rehetra manerana ny Nosy samy manana ny vokatra mampiavaka azy.
Anisan’ny politika nofaritan’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana, ny fanohanana ireo mpamboly madinika ary izy ireo ihany ny ho tonga eo amin’ny toeran’ny mpandraharaha. Tanjona, tsy ireo mpandraharaha lehibe ihany no tokony hahita lalam-barotra fa ny mpamboly koa. Tena mbola sarotra anefa ny hahatongavana amin’izany. Eo aloha ny fampitomboana ny vokatra, izay miankina amin-javatra maro : masomboly, fitaovana hoenti-miasa, toetr’andro, tany ary indrindra ny lalana famoaham-bokatra. Ity faharatsian-dalana famoaham-bokatra ity no matetika fanararaotan’ireo mpandraharaha lehibe sy mpitatitra, hameran’izy ireo ny vidim-bokatra avy any amin’ny mpamboly.
Tantsaha ho tonga mpandraharaha vaventy
Raha tiana ny hahatratrarana ny tanjona, tsy maintsy apetraka mazava ny fiaraha-miasan’ny mpandraharaha vaventy sy ireo mpamboly. Hofanina ny tantsaha hahay mamokatra araka ny kalitao ho an’ny tsena anatiny sy ny any ivelany. Ny tena tanjona, ireo tantsaha ireo ihany no hivadika mpandraharaha madinika ary ho tonga mpandraharaha vaventy, mifampiraharaha ara-barotra eto an-toerana sy any ivelany, mitady mpiara-miombon’antoka aminy.
Momba ny lojy, ohatra, malaza amin’ny famokarana azy io ny any Ambato Boeny, faritra Boeny. Amin’ity faran’ny volana jolay ity, hisy tsenabe hatokana ho amin’izany any an-toerana, fotoana hiantsoana mpandraharaha, hifampiresaka amin’ireo mpamboly any Ambato Boeny. Efa misy koa izao ny fiaraha-miasan’ireo tantsaha madinika amina tetikasa Prosperer, miaraka amin’ny Banky iraisam-pirenena.